The Medialink rawụta hụrụ ka wireless rawụta ebe ọ na-enye Wi-Fi Njikọta. Naanị ikuku ma ọ bụ Wi-Fi na-enye ohere ijikọ ọtụtụ ngwaọrụ dịka ọmụmaatụ igwe onyonyo, igwe na-ebi akwụkwọ ikuku, & Wi-Fi kwere ekwe.
MediaLink rawụta Paswọdu Atụmatụ:
Họrọ akara mgbagwoju anya na nke siri ike ịkọ nkọ maka MediaLink gị nke ị ga-echeta.
Ọ ga-abụrịrị ihe nzuzo, dịka ọmụmaatụ [email protected], pụtara na ị gaghị ada mbà icheta ya.
Olu nke nchekwa na-adabere kpọmkwem na passkey intricacy, na mgbalị e mere iji chebe passkey nke rawụta gị.
Nye Passkey maka rawụta nke ị ga-echeta (ojiji mbụ). Ọ baghị uru ikwu, ị nwere ike ịmepụta akara mgbagwoju anya mgbagwoju anya na ederede dị iche iche, ọnụọgụ, greek tinyere latin. Otú ọ dị na njedebe ị ga-ejedebe na-abanye ya na a nnyapade & etinye ya na rawụta na gbagwojuru nzube.
Alter Default WiFi aha (SSID) & Passkey gbakwunyere na-enyere Network ezo
Ihe ọzọ obere ndụmọdụ (dị ka ọ na-enweghị mmetụta na nchekwa), bụ ịgbanwe Ndi an-kpọ WiFi (SSID) aha dị ka ọ ga-abụ ihe nghọta maka ndị ọzọ mara ihe netwọk ha na-ejikọ.
• Chọọ maka - Ntọala di elu (achọpụtara na igbe menu na elu nke ibe mbụ), & pịa ya
• Chọọ maka - Ikuku ọnọdụ (hụrụ na menu igbe n'elu homepage), & kụrụ na ya
• Chọọ maka - Basic Ikuku Setting (hụrụ na menu igbe n'elu homepage), na kụrụ na ya
Chọọ maka Network Names (SSID), nke a bụ aha Wi-Fi nke Router. Mgbe ịdechara aha netwọk, ị ga-ekwe ka izo ya ezo WPA2-PSK na rawụta. Nke a bụ ọkọlọtọ zoro ezo kachasị sie ike inweta maka netwọ kọmputa.
Tinye ntinye WP Pre-Sharing / WI-Fi Passkey na nso nso a - nke a bụ passkey nke ị ga-eji jikọọ Wi-Fi. Mee ya akara 15-20 ma ghara iji otu passkey nke ị jirila maka MediaLink rawụta nbanye.
MediaLink rawụta nbanye nsogbu:
MediaLink Passkey anaghị arụ ọrụ
Passkeys chọta ụzọ iji rụọ ọrụ! Ma ọ bụ, n'ọtụtụ ihe, ndị ahịa na-achọta usoro iji wepụ ha. N'okwu abụọ a, lee anya "Otu esi ewegharia MediaLink Router na Default Setting".
Chefuru Passkey na MediaLink Router
Ma ọ bụ na ọ bụrụ na ị gbanweela aha njirimara ma ọ bụ okwuntughe mbụ nke MediaLink & chefuru ya, lee lee "Otu esi ewegharia MediaLink Router To Default Setting".
Tọgharia rawụta na Ndi an-kpọ Ntọala
Dị ka, nchekwa nke netwọkụ dị oke mkpa, ọrụ izizi na nke kachasị mkpa bụ igbanwe ihe ntanetị MediaLink Ndi an-kpọ & Ntinye aka na ihe dị nnọọ nchebe & nke onwe.
Soro iwu ịbanye na Medialink Router.
Jikọọ eriri rawụta na laptọọpụ ma ọ bụ PC. …
Gaa na ihe nchọgharị weebụ nke nhọrọ & dee adreesị IP nke rawụta medialink na igbe adreesị. …
Next dee ndabara usernames & okwuntughe nke rawụta iji nweta Admin njikwa. Ugbu a, ị banyela.
Categories Brand Mail igodo